Erayada Muhiimka ah
Inaad aqbasho masuuliyada ficilka qofka.
Xadgudubka Madaniga ah:
Dacwadda xadgudubka madaniga ah waxaa ka mid ah ku xadgudubka taraafikada, ku xadgudubka sharciga degmada, iyo ku xadgudubka kalluunka iyo duurjoogta. Xafiiska Garsoorka ee Vermont wuxuu leeyahay awood sharci oo ku saabsan xadgudubyada bulshada. Xadgudubyada madaniga ah ma ahan dambiyo ciqaabeed. Si kastaba ha noqotee, maxkamaddu waxay ku soo wargelisaa xukunnada xadgudubka madaniga Waaxda Gawaarida Vermont iyo / ama Waaxda Kalluunka iyo Duurjoogta ee Vermont.
Hubinta in macluumaadka xasaasiga ah la qarin doono iyadoo marin loo helayo dadka ku habboon.
Nidaamka Sharciga Dambiyada:
Erey kale oo loo yaqaan Nidaamka Caddaaladda Dambiyada oo dad badani aaminsan yihiin inuu xambaarsan yahay qeexitaan sax ah oo ku saabsan nidaamka caddaalad darrada ah, ama nidaam dadka qaar caddaalad u siiya oo aan loo wada helin.
Xabsi ku jira:
Xaaladda xabsiga ama jeelka.
Federaalka, gobolka, iyo hay'adaha maxalliga ah ee loo xil saaray ilaalinta amniga bulshada iyadoo la adeegsanayo awoodda qasabka ah ee gobolka.
Dembiile / Dambiil;
Qof dambi gala, abuura waxyeelo, iyo / ama falal kale oo qalad ah. Ereybixinta caddaaladda dib u soo celinta, weedha "dhinac mas'uul ka ah" ayaa loo adeegsaday halkii.
Dib u heshiisiinta:
Ficilka xalinta khilaafaadka si loo soo celiyo nabada iyo wada noolaanshaha xiriirka ama bulshada.
Erey dallad ah oo loogu talagalay geeddi-socodka si firfircoon u dhisaya xiriiro caafimaad iyo dareenka bulshada si looga hortago loona wajaho khilaafaadka iyo khaladaadka. RP waxay u taagan tahay isbedel ku-tiirsan oo diiradda saaraya dhibaatadii dhacday, halkii xeerku ka jabi lahaa, soo celinta xiriirka. (Xigasho: Machadka Caalamiga ah ee Dhaqan Celinta)
Barnaamijyada Dib u Galista:
Nidaamyada la taageeray ee qofka laga sii daayay xabsiga uu dib ugu saxo inuu ku dhex noolaado bulshada.
Dhibbane: Qeexid Sharci:
Qofka haya xannuun jireed, shucuureed ama dhaqaale ama geeri ah natiijada tooska ah ee guddiga ama isku dayga fal dambiyeed ama fal dambiyeed iyo sidoo kale waxaa ku jiri doona xubnaha qoyska ee dhibbane yar, aan karti lahayn, ama dil.
Xisbiga uu saameeyay:
Qof kasta, ganacsi, iskuul, ama jaal la ah bulshada oo saameyn ku yeeshay jir ahaan, shucuur ahaan, maskax ahaan, ama dhaqaale ahaan fal dambiyeed, waxyeelo, ama isku dhac. Ereygan waxaa loo adeegsan karaa "dhibbane" iyo / ama "badbaade."
Wareegyada Taageerada iyo La Xisaabtanka barnaamijka oo ku saleysan qaabka cadaaladda dib u soo celinta ee ka caawinta shakhsiyaadka ku jira xabsiga dib u soo celinta bulshada. Tabaruceyaasha COSA ee tababbaran waxay u shaqeeyaan kooxo ka kooban saddex illaa shan waxayna la kulmaan toddobaadle xubinta muhiimka ah si ay uga taageeraan ku soo noqoshada bulshada iyo maaraynta nolol maalmeedka.
CADAALAD DAMBI AH
Nidaamka Caddaaladda Dambiyada:
Nidaamka loo adeegsaday qabashada iyo maxkamadeynta kuwa ku eedeysan dambiyada, iyo xukun iyo xabsi ku rida dadka lagu helo dambiyada.
Nidaam ay dhinac mas'uul ka ah dambi loo oggolaado inay ka fogaadaan maxkamadaha iyadoo la xisaabtamaysa habab kale sida inay kala hadlaan saameynta ficilladooda bulshada, ka qaybgalka la-talinta ama daweynta ku-xadgudubka mukhaadaraadka, iyo / ama dhammaystirka adeegga bulshada. Haddii qofka masuulka ahi si guul leh u dhammaystiro barnaamijka weecinta, dembiga waa laga saari karaa diiwaanka.
Eedayntii / Masuulka:
Dukumiinti rasmi ah oo sharci ah oo lagu soo oogo qof fal dambiyeed ah. Qof eedaysane lagu soo oogay dambi.
Caddaalad isku mid ah:
Barnaamij iyo habraac udub dhexaad u ah dhibanaha / ka badbaaday dambiga, waxyeelada, iyo xadgudubka, iyadoon loo eegin haddii dambiilaha / cidda masuulka ka ah la yaqaan, la qabtay, ama la soo oogay. Shaqadani waxay la mid tahay (laakiin ka madax bannaan tahay) nidaamka sharciyeed ee ciqaabta. Caawinaadku wuxuu ka koobnaan karaa taageero xagga shucuurta ah, qorshaynta amniga ah, macluumaad iyo u diritaanka ururada kale, ama xitaa kaalmada maaliyadeed si loo daboolo baahiyaha aasaasiga ah.
Xisbiga Masuulka ah:
Qof dambi gala iyo / ama waxyeelo. Kani waa erey loo adeegsado in lagu beddelo ereyga "dembiile" ama "dembiile" eraybixinta caddaaladda ee dib u soo celinta. Cidda mas'uulka ka ah waxaa sidoo kale loogu yeeri karaa "kaqeybgale" inta ay socoto howlaha soo celinta caddaaladda.
Nidaamka Aargudashada / Ciqaabta:
Habka iyo ku dhaqanka cadaaladda ee u arka dambiga xadgudub ka dhan ah gobolka, kaas oo qofka masuulka ah uu bixiyo ciqaab ama ciqaabo ciqaab (badanaa ganaax, kormeer edbin, ama xabsi). Nidaamka sharci ee hadda ka jira Mareykanka ayaa tusaale u ah tusaalahan.
Maxkamadaha Gaarka ah:
Maxkamadaha diiradda saara noocyada gaarka ah ee dambiilayaasha, sida qiimeynta kuwa haysta dhibaatooyinka isticmaalka mukhaadaraadka ama baahiyaha caafimaadka maskaxda, iyo u gudbinta daaweynta iyo adeegyada kale sida qeyb isku dhafan ee xukunka iyo xukunka xukun.
Dhibbane: RJ Qeexida:
Qof kasta, ganacsi, iskuul, ama jaal la ah bulshada oo saameyn ku yeeshay jir ahaan, shucuur ahaan, maskax ahaan, ama dhaqaale ahaan fal dambiyeed, waxyeelo, ama isku dhac. Ereygan waxaa loo isticmaali karaa si isweydaarsi ah "dhinaca ay khuseyso".
Akhrinta rasmiga ah ee dacwadaha ciqaabeed ee ka dhanka ah qofka, inta badan eedaysanaha hortiisa. Marka maxkamad la soo taago eedaysanaha waxaa la siiyaa fursad uu ku qirto dambi la'aan, dambi, ama haddii kale sharcigu u ogol yahay. Damiinta badanaa waxaa lagu dejiyaa dacwaddan, iyadoo loo gudbinaayo Wareejinta Maxkamadda.
Qaybta cadaaladda dambiyada:
Kiis dambiyeed, qof waxaa ku eedeysay gobolka Vermont inuu jabiyay ama jabiyay sharciga gobolka. Qeybinta dambiyada ee Garsoorka Vermont waxay wax ka qabataa kiisaska ku lug leh dambiyada, oo ah dambiyada ugu culus, iyo dambiyada aan yareyn. Qaybta dambiyada waxay ka qaadan kartaa kiisaska ugu culus qaybaha kale, sida kalluunka iyo ugaadha iyo ku xadgudubka taraafikada. Qaybta dambiyada waxaa sidoo kale loo yaqaan maxkamadda dambiyada. Maxkamaddu waxay go'aamisaa dembiga ama dambi la'aanta qof lagu soo oogay dambi iyadoo loo marayo dacwadaha xeerbeegtida, dacwadaha maxkamadda, iyo qirashada dambiga.
Wadista wadista madaniga ee leh shatiga la laalay waxaa loogu talagalay inay ka caawiso dadka inay dib u helaan liisanka darawalnimada inta ay ka bixinayaan ganaaxyada iyo khidmadaha.
DAMBIGA LOO QORAY
Dembiga ku taxan / Dambiga la taxay:
Dambi weyn, halkii laga ahaan lahaa dambi, dambi. Dembiyada la taxay waxaa ka mid ah dabagalka, weerarka guriga, faraxumaynta galmada, dilka, xadgudubka daran, afduubka, xakamaynta sharci darada ah, khatarta taxaddar la'aanta ah, jabsiga guri la haysto, iyo kuwo kale. Liistada oo dhameystiran oo ah Dambiyada la taxay ayaa lagu faahfaahiyay Ciwaanka 13aad ee Xeerarka Vermont.
Adeegyada Tijaabada Hore / PTS:
Barnaamijkan maxkamada amartay iyo is-gudbinta waxaa loogu talagalay dadka qaangaarka ah ee isticmaala maandooriyaha ama baahiyaha daaweynta caafimaadka maskaxda kuwaas oo maraya nidaamka maxkamada isla markaana sugaya xalinta dacwada ugu dambeysa. Waxay siisaa kaqeybgalayaasha baaritaano horudhac ah oo diirada saaraya caafimaadka maskaxda, isticmaalka maandooriyaha, iyo halista muuqaalka / halista dib-u-dambiyeed iyo sidoo kale xiriir deg deg ah oo la xiriira adeegyada aagga.
Soo Celinta: Magdhowga la isku raacay in laga bixiyo dhinaca mas'uulka ah dhibanaha / ka badbaaday dambiga. Tan waxaa ku jiri kara lacag loogu talagalay khasaaro hantiyeed, kharashyada caafimaadka, kharashka la-talinta, iwm. Soo celinta waxay mas'uul ka tahay kooxda mas'uulka ka ah dhaqaale ahaan dhibaatada ay geysteen. (Fadlan tixraac Siyaasadda Lacag celinta ee Xarunta Caddaaladda Bulshada wixii cayiman.
Caddaaladda Soo Celinta:
Nidaam iyo ku dhaqanka cadaaladda oo xooga saareysa hagaajinta waxyeelada, taas oo dambiyada iyo isku dhacyada loo arko xadgudub ku ah cilaaqaadka. Caddaaladda Dib-u-Celinta waxay leedahay saddex ujeedo oo waaweyn: in la fahmo dhibaatada uu dembigu u geysto shaqsiyaadka iyo bulshada; in la sahmiyo qaababka cidda masuulka ahi ay wax uga beddeli karto cid kasta oo saamayn ku yeelatay; iyo in mas'uulka mas'uulka ah uu horay u socdo ugana shaqeeyo hadafyo wanaagsan oo naftooda ah. Su'aalaha aasaasiga ah ee Cadaaladda Dib-u-Celinta ayaa ah: Ayaa waxyeello loo geystay? Sidee wax looga qaban karaa ama loo dayactiri karaa waxyeeladaas? Yay tahay inay wax ka qabato ama hagaajiso waxyeelada?
Barnaamij ka weecinta dadka waaweyn ee lagu soo oogay dambi ee haysta maandooriye isticmaal ama u baahan daaweynta caafimaadka maskaxda. Ka-qaybgalayaasha barnaamijkan waxaa si dhakhso leh loogu gudbiyaa adeeg bixiyeyaasha markii ay habboon tahayna, loo gudbiyaa hababka dib-u-hagaajinta oo qayb ka ah la xisaabtanka ficilladooda
Barnaamijka Badbaadinta Maandooriyaha Maandooriyaha (YSASP) waxaa loo qaabeeyey sidii hab lagula xisaabtami karo dhalinyarada jabinta sharciga ee ka dhanka ah cabitaanka qaangaarka ah iyo haysashada marijuana (ounce ama ka yar), si loo baro iyaga cawaaqibka iyo halista maandooriyaha, iyo in la aqoonsado dhalinyarada leh dhibaatooyinka balwada mukhaadaraadka si ay u helaan daaweyn. Kaqeybgalayaashu waxay bixiyaan lacag, waxay la kulmayaan la-taliyaha shatiyeysan ee shatiyeysan ama shahaadeysan si loo baaro ama loo qiimeeyo (waana inay raacaan talooyinka lataliyaha), waana laga yaabaa inay kaqeybqaataan barnaamij waxbarasho oo ay u qabtaan bulshada. Ka qaybqaadashadu waa ikhtiyaari.